दाता सम्झौता: तपाइँलाई के थाहा हुनुपर्दछ? | Law & More B.V.
ब्लग » दाता सम्झौता: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ?
दाता सम्झौता: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ?
शुक्राणु दाताको सहयोगमा बच्चा जन्माउनका थुप्रै पक्षहरू छन्, जस्तै उपयुक्त दाता खोज्न वा गर्भाधान प्रक्रिया। यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष गर्भाधान, कुनै पनि साझेदार, शुक्राणु दाता र बच्चाको माध्यमबाट गर्भवती हुन चाहने पार्टी बीचको कानुनी सम्बन्ध हो। यो सत्य हो कि यस कानूनी सम्बन्धलाई नियम बनाउन दाता सम्झौता आवश्यक पर्दैन। यद्यपि दलहरूबीच कानुनी सम्बन्ध कानुनी रूपमा जटिल छ। भविष्यमा विवादहरू रोक्न र सबै पक्षहरूको लागि निश्चितता प्रदान गर्न सबै दलले दाता सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। एक दाता सम्झौता पनि सुनिश्चित गर्दछ कि सम्भावित आमा बुबा र शुक्राणु दाता बीच सम्झौताहरू स्पष्ट छन्। प्रत्येक दाता सम्झौता एक व्यक्तिगत सम्झौता हो, तर सबैका लागि एक महत्वपूर्ण सम्झौता, किनकि यसले बच्चाको बारेमा सम्झौताहरू पनि समावेश गर्दछ। यी सम्झौताहरू रेकर्ड गरेर, बच्चाको जीवनमा दाताको भूमिकाको बारेमा पनि कम असहमति हुनेछ। दाता सम्झौताले सबै पक्षहरूलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने फाइदाहरूको साथसाथै, यो ब्लगले लगातार दाता सम्झौतामा के समावेश छ भनेर छलफल गर्दछ, यसमा कुन जानकारी भनिएको छ र यसमा कस्तो ठोस सम्झौताहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्दछ।
दाता सम्झौता के हो?
एक दाता सम्झौता वा दाता सम्झौता एक सम्झौता हो जसमा अभिभावक (हरू) र शुक्राणु दाता बिच सम्झौता रेकर्ड गरिन्छ। २०१ 2014 देखि नेदरल्याण्ड्समा दुई प्रकारका अनुदानहरूको छुट्याइएको छ: बी र सी दान।
B- दानदाता यसको मतलब यो हो कि दान एक अभिभावकलाई अज्ञात क्लिनिकको दाताले गरेको हो। जे होस्, यस प्रकारको दाता क्लिनिकद्वारा फाउन्डेशन डोनर डेटा कृत्रिम फर्टिलिसनसँग दर्ता गरिएको छ। यस रेजिष्ट्रेसनको परिणाम स्वरूप, गर्भवती बच्चाहरूलाई पछि उसको वा उनको मूल पत्ता लगाउने अवसर हुन्छ। एक पटक गर्भधारण बच्चा १२ बर्षको उमेर पुगेपछि, उसले वा उनीले यस प्रकारको दाताको बारेमा केही आधारभूत जानकारी अनुरोध गर्न सक्दछन्। आधारभूत डाटा सम्बन्धित छ, उदाहरण को लागी, उपस्थिति, पेशा, परिवार स्थिति र चरित्र लक्षण दान को समयमा दाताले भने अनुसार। जब गर्भधारण बच्चा सोह्र वर्षको उमेर पुगेको छ, उसले वा उनको पनि यस प्रकारको दाताको व्यक्तिगत डेटाको लागि अनुरोध गर्न सक्दछ।
C- दानदाताअर्कोतर्फ, यसको मतलब यसको मतलब यो एक दाता सम्बन्धित छ जुन अभिभावकलाई अभिप्रेत अभिभावकलाई चिन्छ। यस प्रकारको दाता सामान्यतया परिचित आमाबाबु वा साथी सम्भावित सर्कलका कोही हुन् वा सम्भाव्य आमाबाबु आफैले अनलाइन फेला पारेका कोही छन्। पछिल्लो प्रकारको दाता पनि दाता हो जससँग दाता सम्झौताहरू प्रायः निष्कर्षमा पुर्‍याइन्छ। यस प्रकारको दातासँग ठूलो फाइदा भनेको यो हो कि अभिभावकहरूले दातालाई चिन्छन् त्यसैले उनीहरूका विशेषताहरू। यसबाहेक, त्यहाँ कुनै प्रतीक्षा सूची छैन र गर्भाधान छिटो अगाडि बढ्न सक्छ। यद्यपि यस प्रकारको दातासँग धेरै राम्रा सम्झौताहरू गर्नु र यसलाई रेकर्ड गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एक दाता सम्झौता प्रश्न वा अनिश्चितता को स्थिति मा अग्रिम मा स्पष्टीकरण प्रदान गर्न सक्छ। यदि कुनै मुद्दा चलाइन्छ भने त्यस्तो सम्झौताले एकअर्कासँग सहमति जनाएको र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै दलहरूसँग कस्तो इरादे राखेका थिए भन्ने कुरा पूर्वसूचकले देखाउँदछ। कानूनी झगडा र दातासँग कार्यवाही गर्नबाट जोगिनका लागि, दाता सम्झौता तयार गर्न कार्यवाहीको शुरुवाती चरणमा एक वकिलबाट कानूनी सहायता अनुरोध गर्न सुझाव दिइन्छ।
दाता सम्झौतामा के भनिएको छ?
प्राय: निम्न कार्यहरू दाता सम्झौतामा राखिन्छन्:
नाम र दाताको ठेगाना विवरणहरू
सम्भावित अभिभावक (हरू) को नाम र ठेगाना विवरणहरू
शुक्राणु दान बारे सम्झौताहरू जस्तै अवधि, सञ्चार र ह्यान्डलिंग
वंशगत दोषहरुमा अनुसन्धान जस्ता चिकित्सा पक्षहरु
मेडिकल डाटा निरीक्षण गर्नका लागि अनुमति
कुनै भत्ता। यी प्राय: यात्रा लागत र दाताको मेडिकल परीक्षणको लागि लागत हुन्।
दाताका अधिकार र दायित्वहरू।
बेनामी र गोपनीयता अधिकार
दुबै पक्षको दायित्व
स्थितिमा परिवर्तन भएमा अन्य प्रावधानहरू
बच्चा सम्बन्धी कानूनी अधिकार र दायित्व
जब यो गर्भवती बच्चाको कुरा आउँछ, एक अज्ञात दाता सामान्यतया कुनै कानुनी भूमिका हुँदैन। उदाहरण को लागी, एक दाता को लागी लागू गर्न सक्नुहुन्न कि ऊ कानूनी रुपमा गर्भधारण बच्चाको अभिभावक बन्छ। यसले यस तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन कि केही परिस्थितिहरूमा दाता कानूनी रूपमा बच्चाको अभिभावक बन्न सम्भव छ। कानुनी अभिभावकको लागि दाताका लागि एकमात्र तरीका भनेको जन्मिएको बच्चालाई मान्यता दिएर हो। यद्यपि सम्भावित अभिभावकको सहमति यसका लागि आवश्यक छ। यदि गर्भधारण बच्चाको पहिले नै दुई कानुनी आमा बुबा छ, यो दाता को लागी गर्भधारण बच्चा लाई अनुमति संग पनि चिन्न सम्भव छैन। अधिकार एक ज्ञात दाताको लागि बिभिन्न छन्। त्यो अवस्थामा, उदाहरणका लागि, एक भ्रमण योजना र गुजारा पनि एक भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारण सम्भावित आमाबुवाहरूले दातासँग निम्न बुँदाहरू छलफल गर्न र रेकर्ड गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ:
कानूनी प्यारेन्टिंग। यो विषय दातासँग छलफल गरेर, सम्भावित आमाबाबुले उनीहरूलाई अन्ततः यो देखेर छक्क पर्न सक्छ कि दाताले गर्भधारण गरेको बच्चालाई आफ्नो / उनको आफ्नै मान्यता दिन चाहन्छ र त्यसैले यसको कानुनी अभिभावक हुन चाहान्छ। त्यसकारण दातालाई पहिल्यै सोध्नु महत्त्वपूर्ण छ कि ऊ बच्चालाई पनि चिन्न चाहन्छ र / वा हिरासतमा छ। त्यसपछिको छलफलबाट जोगिनका लागि दाता सम्झौतामा यस बिन्दुमा दाता र अभिभावकबीच के छलफल भएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा रेकर्ड गर्नु पनि बुद्धिमानी हुन्छ। यस अर्थमा, दाता सम्झौताले अभिप्रेत अभिभावक (हरू) को कानुनी अभिभावकको सुरक्षा गर्दछ।
सम्पर्क र अभिभावक। यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जुन सम्भावित आमाबुवा र दाताले दाता सम्झौतामा पहिल्यै छलफल गर्न योग्य छ। अझ विशेष गरी, शुक्राणु दाता र बच्चा बीच सम्पर्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यदि यो मामला हो भने, दाता सम्झौताले परिस्थितिहरू पनि निर्दिष्ट गर्न सक्दछ जुन अन्तर्गत यो हुनेछ। अन्यथा, यसले गर्भवती बच्चालाई आश्चर्यचकित हुनबाट (अनावश्यक) रोक्न सक्छ। अभ्यासमा, सम्भावित आमाबाबु र शुक्राणु दाताहरूले एक अर्कासँग गरेका सम्झौताहरूमा भिन्नताहरू छन्। एउटा शुक्राणु दाताले बच्चासँग मासिक वा त्रैमासिक सम्पर्क राख्दछ, र अर्को शुक्राणु दाता सोलह नहुन्जेल बच्चासँग भेट गर्दैनन्। अन्तमा, यो दाता र सम्भावित अभिभावकहरूमा निर्भर हुन्छ कि यससँग मिलेर सहमत हुनुपर्दछ।
बाल समर्थन। जब यो दाता सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि दाताले आफ्नो बिउ अभिभावकलाई मात्र दान गर्दछ, त्यो कृत्रिम गर्भाधानको लागि उपलब्ध गराउनु भन्दा बढि केहि पनि भन्नु हुँदैन, दाताले बच्चाको समर्थन तिर्नु पर्दैन। जे भए पनि, त्यो अवस्थामा उहाँ कारक एजेन्ट हुनुहुन्न। यदि यो केस हैन भने यो सम्भव छ कि दाता कारक एजेन्टको रूपमा देखिएको छ र पितृत्व कार्य मार्फत कानुनी बुबाको रूपमा नियुक्त गरिएको छ, जसलाई मर्मतसम्भार तिर्न बाध्य हुनेछ। यसको मतलव दाता सम्झौता केवल अभिभावक अभिभावक (हरू) को लागि मात्र महत्वपूर्ण छैन, तर निश्चित रूपमा दाताको लागि पनि हो। दाता सम्झौतासँग, दाताले प्रमाणित गर्न सक्छ कि ऊ एक दाता हो, जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि भावी अभिभावक (हरू) को मर्मतको माग गर्न सक्षम हुनेछैन।
मस्यौदा, जाँच वा दाता सम्झौता समायोजन
के तपाईंसँग पहिले नै दाता सम्झौता छ र के त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जुन तपाईं वा दाताको लागि परिवर्तन भएको छ? त्यसो भए दाता सम्झौता समायोजन गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ। भ्रमणको क्रममा परिणामहरू भएको चालको बारे सोच्नुहोस्। वा आम्दानीमा परिवर्तन, जसले गुजारा चलाउनको लागि समीक्षा आवश्यक छ। यदि तपाईंले समयमै सम्झौता बदल्नुभयो र दुबै पक्षले समर्थन गर्ने सहमति गर्नुभयो भने, तपाईं एक स्थिर र शान्तिमय जीवनको सम्भावना बढाउनुहुन्छ, आफ्नै लागि मात्र होइन बच्चाको लागि पनि।
के अवस्था तपाईंको लागि त्यस्तै रहन्छ? त्यसो भए पनि कानुनी विशेषज्ञद्वारा आफ्नो दाता सम्झौता जाँच गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ। मा Law & More हामी बुझ्छौं कि हरेक परिस्थिति फरक हुन्छ। त्यसकारण हामी व्यक्तिगत दृष्टिकोण राख्छौं। Law & Moreवकीलहरु पारिवारिक कानून मा विशेषज्ञ छन् र तपाइँ संग तपाइँको अवस्था समीक्षा र दाता सम्झौता कुनै समायोजन योग्य छ कि छैन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं एक विशेषज्ञ परिवार कानून वकील को मार्गदर्शन मा एक दाता सम्झौता को आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसो भए पनि Law & More तिम्रो लागि तयार छ। हाम्रो वकिलहरु पनि कानूनी सहायता वा सल्लाह प्रदान गर्न को लागी अभिभावक र दाता बिच मा एक मामला को स्थिति मा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईसँग यस शीर्षकमा अरू प्रश्नहरू छन्? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं।
अघिल्लो पोस्ट उपक्रमको स्थानान्तरण
अर्को पोस्ट शेलको बिरूद्ध मौसम सम्बन्धी नियम